Ikhosi yokuModela uMkhukula-i-HEC-RAS ukusuka ekuqaleni-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi yokuModela uMkhukula-i-HEC-RAS kwasekuqaleni
Ukuhlaselwa kwezikhukula kunye nesoftware ngesoftware yasimahla: HEC-RAS
I-HEC-RAS yinkqubo ye-United States Army Corps yeinjineli, ye imodeli yezikhukula kwimilambo yendalo kunye neminye imijelo. Kule khosi intshayelelo, uyakubona inkqubo yokufezekiswa kweemodeli ezinamacala-nye, nangona kunguhlobo lwesihlanu lwenkqubo, imodeli yokuhamba-ntlu-mbini ibandakanyiwe, kunye nokubanakho kwemodeli yokudlulisa intlenga.
Isifundo siya kuqhubela phambili kuyo yonke inkqubo yokuvelisa imodeli: ukusuka ekudalweni kwejometri, uhlalutyo lokungeniswa kwedatha, ukwenziwa kwemodeli, kunye nokuthumela idatha.
Sisifundo esibalaseleyo ngokusebenzayo Ngemilinganiselo yethiyori elungileyo nefanelekileyo, apho izinto zibonelelwa ukuba zilandele isifundo ngasinye ngexesha.
IHecRas yinkqubo yokubala ubumanzi nezikhukula.
Yazi ukusetyenziswa kwe-HEC-RAS kwinqanaba lokuqalisa
Qonda imigaqo esisiseko ye-hydrology kunye ne-hydraulics esetyenziswa yinkqubo
Yenza imodeli yezikhukula kwaye utolike iziphumo zabo
Ulwazi olusisiseko lwe-hydrology
Ulawulo lwesoftware kwinqanaba lokuqalisa
Iingcali ekufuneka zenze imifuziselo yezikhukula
Ndinomdla ekwazini isoftware entsha eluncedo kumsebenzi wakho wobugcisa
Iikhosi-LandWorks Izifundo ze-HEC-RAS
Ikhosi ye-Civil 3D yemisebenzi yoluntu - iNqanaba loku-2
Umfuziselo wesikhukula kunye nekhosi yokuhlalutya - usebenzisa i-HEC-RAS kunye ne-ArcGIS